Mogadishu Journal » Maamulka Banaadir Oo Iska Fogeeyay Nin La Sheegay In Uu Dili Rabay Tarsan.
(mjournal):Maamulka gobolka Banaadir ayaa iska fogeeyay inuu shaqaalaha maamulka ka mid ahaa nin lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay isku day fashilmay oo lagu doonayay in lagu dilo guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan).
Maamulka Banaadir ayaa war uu saxaafadda ugu talagalay ku sheegay in baaritaan kaddib la ogaaday in eedeysanaha oo lagu magacaabo Tahliil Cabdullaahi Nuur, oo ku jira xabsiga laanta nabad-sugidda, uusan ka mid ahayn shaqaalaha, wuxuuna beeniyay warar horey uga soo baxay hay’adda nabad-sugidda oo sheegayay inuu Tahliil ka mid ahaa shaqaalaha maamulka.
Warka qoraalka ah ayaa lagu caddeeyay inuu Tahliil ahaa darawal ka shaqeyn jiray dowladda hoose, isla markaana uu saaxiib la ahaa agaasimihii guud ee dowladda hoose.
Eedeysanaha ayaa la sheegay inuu qirtay inay al-Shabaab u soo adeegsatay in uu dilo guddoomiyaha gobolka.
Tahliil Cabdullaahi Nuur ayaa warbaahinta u sheegay inay al-Shabaab la soo xiriireen, una soo dirsadeen in uu miino ku xiro xafiiska guddoomiyaha si loogu qarxiyo, wuxuuna tilmaamay in loo sameeyay ballan-qaadyo.